In ka badan 22 wasiir oo ka mid ahaa xukuumadda Cali Geedi oo xilalkoodii iska casishay, iyadoo lagu kala xanaaqsan yahay. | JILYAALE_ONLINE
In ka badan 22 wasiir oo ka mid ahaa xukuumadda Cali Geedi oo xilalkoodii iska casishay, iyadoo lagu kala xanaaqsan yahay.
October 11, 2007 by jilyaale
In ka badan 22 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda KMG ah ee Somalia ayaa saakay is casilay xilli magaalada Baydhabo uu ka soconayo olole majaraha loogu siibayo xukuumadda Ra’isulwasaare Cali Max”ed Geedi oo si weyn ay isku khilaafsan yihiin Madaxweynaha dowladda KMG ah.
Wasiirada is casilay ee aynu helnay magacyadooda ayaa waxaa ka mid ah:-
1. Max’ed Max’uud Gacmo Dheere. Wasiirka Arimaha gudaha,
2. Cabdi Max’ed Tarax, Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta.
3. Ismaciil Maxamuud Hurre Buubaa, Wasiirka waxbarashada.
4. Max’ed Ibraahim Xaabsade, Wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka
5. Cali Ismaciil Cabdi Giir wasiirka Dekedaha/.
6. Aamino Max’ed Mursal, Wasiirka Haweenka.
7. Cali Cabdulaahi Cosoble, Wasiirka Qorsheynta Qaranka.
8. C/laahi Cabdi Garuun, wasiirka amniga qaranka.
9. Xasan Max’ed Nuur Shaati gaduud, Wasiirka maaliyadda.
10. Max’ed Nuuraani Bakar, Wasiirka Macdanta iyo biyaha.
11. C/risaaq Isaaq Biixi, wasiirka G/dhigga.
12. Xasan Dhimbil Warsame wasiirka Garsoorka.
13. Qamar Aadan Cali, Wasiirka caafimaadka.
14. Madoobe Nuunoow, wasiirka warfaafinta iyo kuwo kale.
15. C/laahi Axmed Afrax, Wasiirka Ganacsiga.
16. Max’ed Cabdulaahi Kaamil, Warshadaha
17. C/raxmaan Jaamac Rooble, Dib u dhiska
18. Qamar Aadan Cali. Wasiirka caafimaadka.
19. Cali Max’ed Max’uud, Wasiirka dalxiiska iyo duurjoogta,
20. C/laahi Yuusuf Xaraare , Wasiirka Batroolka iyo tamarta
21. Cali Axmed Jangali, wasiirka xanaanada xoolaha.
22. C/qaadir Nuur Caraale, wasiirka Beeraha
Sabaha wasiiradaan ay isku casileen ayaa waxa ay ku sheegeen in ay ka mid tahay xukuumadda KMG ah oo diiday in kalsooni ay weydiisato Baarlamanka KMG ah, iyadoo waqtigeeda uu ku eg yahay 12 October.
Wasiiradaan ayaa lagu wadaa in ay qabtaan shir Jaraa’id oo ay ku faahfaahinayaan sababaha keenay iscasilaadooda.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay ku soo waramayaan in ay kadambeeyaan is casilaada Wasiirada madaxda sare oo iyagu doonayo in ay xilka kaxayuubiyaan Cali Maxame Geedi.
Waxaa lagu soo waramayaa in laqorsheeynayo markii larido Xukuumada uu Ra´isal wasaaraha kayahay Cali Geedi, in Ra´isal wasaare loo magacaabi doono Maxamed Maxamuud Gacma-Dheere oo isagu iminka iska casilay Wasiirka Arimaha Gudaha.
← Illaa 30 Ciidamada Ethiopia oo xalay ku nafwaayay qarixii ismiidaaminta ahaa ee kadhacay Magaalada Baydhabo.
Saalax Cali Faarax wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo xalay baydhabo ay ku dhaaweceen Ciidamada Gudoomiyaha Baarlamaanka. →